ဆက်သွယ်ရန် - ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူ၊ စက်ရုံ - လျှော့ချသူများ၊ တီကောင်လျှော့ချသူများ၊ တီကောင်ဂီယာအုံများ၊ ဂြိုဟ်ဂီယာအိတ်များ၊ အမြန်နှုန်းလျှော့ချစက်များ၊ ကွဲပြားခြားနားသောစက်များ၊ helical gear, sprial bevel ဂီယာများ၊ စိုက်ပျိုးရေးဂီယာအုံများ၊ လယ်ထွန်စက်ဂီယာများ၊ ထရပ်ကားဂီယာများ၊
ZheJiang Ever-Power ဂီယာကုမ္ပဏီလီမိတက်
လိပ္စာ: တရုတ်ပြည်၊ ဟန်ဇောင်၊ Wener အနောက်လမ်း ၂၆၈-၂၇
NRV worm reducers (NMRV worm geared motor)၊ သံသတ္တု worm မြန်နှုန်းလျှော့ချသောကိရိယာများ၊ In-line helical reducers၊ parallel parallel shaft helical gear reducers, helical bevel reducers, helical worm gear reducers၊ စိုက်ပျိုးရေး gearboxes, PTO shaft, အထူး reducer acc ။ ဖောက်သည်များ၏ပုံဆွဲခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဂီယာမော်တာများ၊ လျှပ်စစ်မော်တာများ (Y2 စီးရီးလျှပ်စစ်မော်တာများ၊ Y စီးရီးလျှပ်စစ်မော်တာများ YD စီးရီးအမြန်နှုန်းအမြန်နှုန်းရှိလျှပ်စစ်မော်တာများ၊ YS စီးရီးလျှပ်စစ်မော်တာများ၊ YC YL စီးရီးလျှပ်စစ်မော်တာများ၊ Y3 စီးရီးလျှပ်စစ်မော်တာများ)၊ ဘရိတ်မော်တာများ , Conveyors system, roller များ၊ လျှပ်စစ် drive roller များစသည်တို့နှင့်ဆက်စပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုလိုင်းများ (တပ်ဆင်ရန်မျဉ်းကြောင်းများ) ထုတ်လုပ်သည်။
Hangzhou Ever-Power Transmission Co ။ Ltd.
အစက်အပြောက်များ၊ သံမဏိပြားများ၊ QD ချုံများ၊ ထိန်သိမ်းများ၊ ဂီယာများ၊ bevel ဂီယာများ၊ စွယ်ဂီယာများ၊ ဂီယာယူနစ်များ၊ တီကောင်ဂီယာများနှင့်တီကောင်များ၊ helical gear, spiral bevel gears, ရိုးတံများ၊ ရိုးတံများ၊
HanDan Ever-Power Transmission Co ။ Ltd.
v ခါးပတ်သီးသီး (sheaves), Taper bore စက်ရုံများ, အစိုင်အခဲအချက်အချာစက်သီး, အချိန်ကိုက်စက်သီး, Taper bore အချိန်ကိုက်ရိုး, Taper ချုံ, QD bushesing, သတ္တုများပုံသွန်းသောသံထုတ်ကုန်, အလူမီနီယံပုံသွန်း, သံမဏိ Casting, သံသတ္တုများ, သံမဏိသတ္တုများနှင့်အခြားထူးခြားသော ပစ္စည်းများ accing ချ။ ဖောက်သည် '' ပုံဆွဲရန်
ထိုင်ဝမ် Ever-Power ဂီယာကုမ္ပဏီလီမိတက်?
Tel: 0086-576-88476565 သို့မဟုတ် 13084671511
ထုတ်လုပ်မှု: Sprockets, gear, couplings, Pulleys (sheaves), NRV worm reducers (NMRV worm geared motor)၊ Cast be worm speed speed reducers, in-line helical reducers, parallel shaft helical gear reducers, helical bevel reducers, helical worm ဂီယာ reducers, စိုက်ပျိုးရေးဂီယာအုံများ, PTO ရိုးတံ, အထူးလျှော့ချ acc ။ ဖောက်သည်များ၏ပုံဆွဲမှုများ၊ ပြောင်းလဲခြင်းများ၊ ဂီယာမော်တာများ၊ လျှပ်စစ်မော်တာများ (Y2 စီးရီးလျှပ်စစ်မော်တာများ၊ Y စီးရီးလျှပ်စစ်မော်တာများ YD စီးရီးအမြန်နှုန်းအမြန်နှုန်းမြင့်မော်တာများ၊ YS စီးရီးလျှပ်စစ်မော်တာများ၊ YC YL စီးရီးလျှပ်စစ်မော်တာများ၊ Y3 စီးရီးလျှပ်စစ်မော်တာများ)၊ ဘရိတ်မော်တာများ , Conveyors system, လိုင်းများ (assembly line များ) roller, လျှပ်စစ် drive ကို roller ကဲ့သို့ဆက်စပ်အစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်လုပ်ရန်
Shaoxing Ever-Power ဂီယာကုမ္ပဏီလီမိတက်
Sprockets, ပန်းကန်ဘီး, QD ချုံ, ထိန်သိမ်း, ဂီယာ, bevel ဂီယာ
နေရပ်လိပ်စာလိပ်စာ - အခန်း ၄၁၄၊ Daewoo The Oville ရုံး၊ အမှတ် ၂၂-၅၊ Shingil-Dong, Youngdeungpo-Ku, ဆိုးလ်
Tel: 02.832.2613 ဖက်စ်: 02.832.2614?
Splockets, gear, couplings, Pulleys (sheaves), NRV worm reducers (NMRV worm geared motor)၊ Cast be worm speed speed reducers, in-line helical reducers, parallel shaft helical gear reducers, helical bevel reducers, helical worm gear geareses, စိုက်ပျိုးရေးဂီယာအုံ , PTO ရိုး, အထူးလျှော့ချ acc ။ ဖောက်သည်များ၏ပုံဆွဲမှုများ၊ ပြောင်းလဲခြင်းများ၊ ဂီယာမော်တာများ၊ လျှပ်စစ်မော်တာများ (Y2 စီးရီးလျှပ်စစ်မော်တာများ၊ Y စီးရီးလျှပ်စစ်မော်တာများ YD စီးရီးအမြန်နှုန်းအမြန်နှုန်းမြင့်မော်တာများ၊ YS စီးရီးလျှပ်စစ်မော်တာများ၊ YC YL စီးရီးလျှပ်စစ်မော်တာများ၊ Y3 စီးရီးလျှပ်စစ်မော်တာများ)၊ ဘရိတ်မော်တာများ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များ၊ သံမဏိပြားများ၊ ဘီးဘီးများ၊ QD ချုံပုတ်များ၊ ထိန်သိမ်းစက်များ၊ ဂီယာများ၊ ကုန်းဂီယာများ၊ စွယ်ဂီယာများ၊ ဂီယာယူနစ်များ၊ တီကောင်ဂီယာများနှင့်တီကောင်များ၊ ဂီယာ, ရိုးတံကော်လာ, မော်တာအခြေစိုက်စခန်း, v ခါးပတ်စက်သီး (sheaves), Taper bore စက်ရုံများ, အစိုင်အခဲအချက်အချာစက်သီး, အချိန်ကိုက်စက်သီး, Taper bore အချိန်ကိုက်စက်သီး, Taper ချုံ, QD bushesing, သံထုတ်ကုန်, လူမီနီယံ die casting, သံမဏိ Casting, သံသတ္တုများပုံသွန်းခြင်း၊ သံမဏိအတုများနှင့်အခြားအထူးသွန်းလောင်းခြင်းဆိုင်ရာအရာများ၊ ဖောက်သည် '' ပုံဆွဲရန်
7 / စီးပွားဖြစ် BLDG အပေါ် F.KIN ။ , 49-51 JERVOIS လမ်း, ရှောင်းဝမ်ဟောင်ကောင်
ဖက်စ်။ : 00852-31781675